तीतो मीठो | गृहपृष्ठ
on: June 21, 2019 तीतो मीठो
आमा, भोक लाग्यो ! पख छोरी, तिम्रो बाउ अन्न फलाउन बीउ र मल किन्न शहर गा’छन् । आमा, तिर्खा लाग्यो । पख बा, मेलम्ची खोला आउँदै छ । आमा, यत्ति धेरै दूध दुह्यौ, तकारी फलायौ । अब कल्ले किन्छ त ? छ...	बिस्तृतमा
on: June 14, 2019 तीतो मीठो
एक/दुईबाहेक नेपालमा चलेका ‘टीभी रियालिटी शो’ त्यति राम्रा, स्तरीय विषयवस्तु भएनन् भन्ने जनगुनासा धेरै सुनिन थालेको छ । प्रयास गर्‍यो भने कतै आफै पो एउटा खतरा कार्यक्रम बनाऊँ कि जस्तो लागेको...	बिस्तृतमा
on: June 07, 2019 तीतो मीठो
छिटै बजारमा आउन लागेको एक मिडिया हाउसका लागि उदीयमान पत्रकारहरूको तुरुन्त आवश्यकता छ । यो मिडियामा नेपालका राजनीतिमा लागेर रातारात धनी बन्न सफलहरू, केही सुन व्यापारी, जग्गा व्यवसायी र खासगरी...	बिस्तृतमा
देशमा रेलै रेल चलेपछि त विकासको गति त छोइ नसक्नु हुने भो त । हुन पनि रेल भनेकै गति हो र गति भनेकै प्रगति हो, अहिलेको जस्तो दुर्गति होइन । रेल आएपछि त्यो कहिले बालुवाटारबाट सिंहदरबार, कहिले ब...	बिस्तृतमा
नेपालमा गोयबल्सका पनि गुरू जन्मिइसकेका छन् । गोयबल्स अर्थात् हिटलरका सबैभन्दा प्रिय पात्र र सन् १९३३ देखि १९४५ सम्म नाजी सरकारका प्रोपोगाण्डा मन्त्री उनै पउल जोसेफ गोयबल्स । उनको प्रचारशैली...	बिस्तृतमा
on: May 17, 2019 तीतो मीठो
हाम्रो देशको माटोमा गणतन्त्रको युरिया पर्‍या मात्र के थ्यो, यी तीन चीज खूब फुल्न थाल्या छन्– दलाल, गुन्डा र नेता । कतिपयले रूपमा यी तीन भाइ फरक देखिए पनि सारमा एकै हो भन्छन् । अर्थात् यी तीन...	बिस्तृतमा
on: May 10, 2019 तीतो मीठो
‘अब सडकमा जहाज बस्छन् । टुँडिखेलमा तरकारी रोपिन्छ । पहिले पोखरीहरू फुटबल ग्राउन्ड बन्नेवाला थे । अब फेरि पोखरीमा परिणत हुन्छन् । आइन्दा जिंग्रिङ्ग भएर सडकमा मान्छे बस्दैन । कोही भोकै वा धूलो...	बिस्तृतमा
on: May 03, 2019 तीतो मीठो
ककल्ले हो बालुवाटारको जग्गा खाए रे । अर्काथरीले खुलामञ्च र टुँडिखेल नि भ्याए रे । हरेक दिन, हरेक हप्ता पार्टीका नेता, सरकारी पदाधिकारी, व्यापारी आदिले खाएका र भ्याएका यस्तै झिनामसिना कुरा गर...	बिस्तृतमा
युक्रेनमा हास्य कलाकार भ्लादिमिर जेलिन्स्की राष्ट्रपति बनेछन् । उनले जीवनभरि हँसाए, सरकार चलाउन परेपछि अब पक्कै सिरियस हुन्छन् होला । तर, यता नेपालमा हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली लामो समय सिरिएस...	बिस्तृतमा
on: April 19, 2019 तीतो मीठो
सरकार खासगरी प्रम ओली देशमा जसरी पनि समृद्धि ल्याइछाड्ने भनेर सुरुवाल कसेर लागिरहनु भएको छ । त्यसका लागि उहाँले पानीजहाज, रेल हुँदै केही महीनाअघि बिजुलीका पोलहरूबाट समेत सासुकोषको घोषणा गर्न...	बिस्तृतमा